नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ ७, २०७६, २१:३९
जनकपुर- प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषयमा अन्योल थपिएको छ। प्रदेशको नाम के हुने भन्ने विषयको बहसले अहिले पुरा प्रदेश नै तातेको हो। यस विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पक्षविपक्षमा दोहोरी सुरु भएको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दलैपिच्छे राजधानी र प्रदेशको नामबारे फरकफरक प्रस्ताव दर्ता भएपछि थप अन्योल देखिएको हो। यतिमात्रै नभई केही दलका सांसदहरुले पनि पार्टीमा विद्रोह गर्दै छुट्टै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन्।
प्रदेश २ को नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाले आह्वान गरेअनुसार संसदीय दलहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र विपक्षी दल कांग्रेसभित्र प्रदेशको नामका विषयमा मतभेद देखिएको छ।
सबै दलको आफ्नै एजेन्डा हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलमा देखिएको फरक मतले गर्दा आउने दिनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद सिर्जना हुन पुगेको हो। कांग्रेसका केही सांसदहरूले नै प्रदेशको नाम मध्यमधेश हुनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका छन्।
सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले पनि पार्टीको लाइनविपरीत राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा कांग्रेसका ४ र सत्तारुढ समाजवादीका ७ जना सांसद छन्।
सत्तारुढ दलका सांसद सिंगासन साह कल्वारले बारा, पर्सा र रौतहटका केही सांसद तथा राजपा नेपालका केही सांसद समेत राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै आफूहरूले जनताको दबाबमा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
नेकपामा समेत मधेश प्रदेशका पक्षधरताहरू छन्। तर नेकपाले जानकी प्रदेश र जनकपुर, पूरै धनुषा राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराउँदा कुनै पनि सांसदले हालसम्म औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि बाहिर सार्वजनिक गरेका छैनन्।
के भन्छन् बुद्धिजिवीहरू?
प्रदेशसभामा रहेका नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी-राजपा नेपालले फरकफरक प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद अझ बल्झिने बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका छन्।
नाम र राजधानीको सवालमा दलहरूले गरेको प्रस्ताव अदूरदर्शी रहेको समेत उनीहरुको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राडा. सुरेन्द्र लाभले राजनीतिक अदूरदर्शीताका कारण दलहरूले प्रदेश २ को ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक महत्वको हिसाबले नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको बताए।
बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीले संसदीय दलहरूले गरेको प्रस्तावको कारण दीर्घकालसम्मका लागि विवाद रहिरहने टिप्पणी गरेका छन्। जसको कारणले गर्दा आउने दिनमा भारतको विहारबाट झारखण्डजस्तै प्रदेश २ मा समेत सांस्कृतिक र पहिचानको आन्दोलन हुन सक्ने खतरा औंल्याए।
रोशन जनकपुरीले ऐतिहासिकता तथा संस्कृति तथा राजनीतिक परिदृश्यको हिसाबले ‘मिथिला भोजपुरा मधेश’ नाम नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने भए पनि त्यसमा राजनीतिक दलहरू चुकेको बताए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहिरहे हाल प्रदेशसभामा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरुमध्ये कुनै प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन्।
उनीहरूले प्रदेशसभामा सहमति भएर कुनै नाम पारित भए पनि पछिसम्म विवाद रहिरहने सक्ने औंल्याएका छन्।
दुई तिहाई बहुमत आवश्यक
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा कुल १ सय ७ जना सांसद छन्। जसमध्ये सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२, नेपाली काँग्रेसका १९ जना सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्।
प्रदेशको नामारकण र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ। जसअनुसार दुई तिहाई बहुमतका लागि ७२ जना सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ।
तसर्थ प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि कसैसँग दुई तिहाई बहुमत नरहेकोले एक अर्को दलसँग सहमति गर्नुपर्ने र आ-आफ्नो अडानबाट केही पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ। अब हेरौं के हुन्छ नाम र राजधानी भनेर प्रदेश २ को जनता पर्खाइमा छन्।